Nagu saabsan - Hebei Shaoman International Trade Co., Ltd.
Shirkadda ganacsiga caalamiga ah ee Hebei Shaoman waa shirkad hal-abuur leh oo ku takhasustay naqshadeynta, horumarinta, soo-saarka iyo suuq-geynta alaabada lagu ciyaaro ee galmada. Waxaan si adag u hoggaansameynaa heerarka ISO & ROHS, oo waxaan raacnaa fikradda wax soo saarka ee Eco-friendly iyo Non-sun, maqaarka u habboon, dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbay imtixaanka CE iyo FDA. Waxaan diirada saareynaa soo saarida iyo soo saarida wax soo saar tayo sare leh oo qaangaar ah.
Waxaan leenahay waax cilmi baaris iyo horumarineed oo aad u xoogan, hada shirkadeena ayaa si deg deg ah ugu horumarinaysa arintan Shiinaha. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiisha dibada iyo kuwa gudahaba inay nalashaqeeyaan mustaqbalka. Waxaan sidoo kale si diiran u soo dhaweynaynaa amarada OEM iyo ODM. Waxaan rajeyneynaa inaan ku siino alaabtayada ugu fiican iyo adeegga ugu fiican.
Waxaan inta badan siinaa adeeg hal-joogsi ah macaamiisha. Waxaan u qaybinaa noocyada kala duwan ee qalabka galmada, oo ay ku jiraan caruusadaha galmada, lugaha siigaysiga, masturbator dameer weyn, kaydiyayaal, dildos, koob siigaysi, kubbad kegel ah, gariiriyeyaal, Ciyaaraha dabada, alaabada taxanaha ah ee 'SM' oo la buufin karo… iwm.
Waxaan ku takhasusay doll jinsi caqli badan, TL doll doll, caruusadda galmada Silicone in ka badan 12 sano. Robotka iyo caruusadda galmada waa la isku daraa, waxaan ku siinnaa caruusadda galmada caqliga leh bilig yeelista, dhoolla caddaynta, codka iyo kuleylka. Caruusadda galmada waxaa ka mid ah caruusada galmada labka ah, caruusadda galmada dheddigga, caruusadda jinsiga nuskeed, caruusadda galmada ee ragga. Badanaa waxaa si weyn loogu isticmaali karaa moodooyinka xayeysiinta, wehel dadka, lamaanaha galmada.
Horumarka bulshada, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa dareemaya cidlo waxayna leeyihiin culeys aad u weyn nolosha iyo shaqada. Marka alaabada lagu ciyaaro galmada kaliya looma isticmaalo is shukaansiga lammaanaha, laakiin sidoo kale waxay hagaajin kartaa lammaanaha jacaylka, gaar ahaan kuwa leh cillad jinsi, rabitaan la'aan galmada, ama dhibaato xagga nolosha galmada caadiga ah. Sidoo kale qalabka galmada waxay yareyn karaan cadaadiska galmada waxayna yareyn karaan niyadda madow.
Badeecadayada mar hore ayaa laga iibiyey Yurub (sida Jarmalka, UK, Faransiiska, Netherland, Belgium, Italy, Spain, Austria, Russia, USA, Canada, Brazil, Australia, Japan, Korea, Thailand, iwm. Waxaan haynaa iibin xirfadlayaal ah, kooxda adeegga iibka kadib, si loo hubiyo inaad hesho khibrad iibsi oo qiimo leh.